I-Squid Game Mini Ball ngu-Eros Ebony Oyoun | Ukucinga ngokutsha kwenkcubeko
I-Squid Game Mini Ball ngu-Eros Ebony
NgoNovemba 19, 2021
« Imibongo Idibana w / Caxxianne - Vortex Special III
Irhoxisiwe: Ikhanvasi kaFrank's Wite kwiKonsathi-uMthetho wokuvula: uMauricio Nader »
U-Eros Marciano Ebony (IG: jan.nwattuizipho: UMDLALO SQUID MINI BALL.
➤ Iingcango zivulekele abathathi-nxaxheba: 16:00
Iingcango zivulelwa ababukeli: 16:30
➤ Ukuqala kwebhola: 18:30
➤ Amatikiti: iofisi yebhokisi kuphela (imali kuphela).
Abathathi-nxaxheba - € 5
I-QT * BIPOC- € 10
Eminye- € 15
Umgqabantshintshi: Ocean 007
Umkhosi: Umama waseJamani u-Ambrosia Gucci
DJ: Ceekay Ninja
eRia eSaint Laurent
Isiphiwo Gorgeous Gucci
Umama weCherry Ebony wamazwe ngamazwe
Umama waseDatshi uSavphire Revlon
UBawo waseJamani uDavid Milan
Itheyibhile yexesha elichanekileyo kunye nolwazi oluninzi luyeza kungekudala.
Umqali weNdlela yokubaleka i-OTA - ingwane
Uphefumlelwe squids kunye neengwane. Cinga ngeentente, ulwandle, iingalo ezisibhozo-yila.
MF Realness - frontman
Uyinkokeli engaqondakaliyo yombutho weSquid Game. Kuphantse ukuba akunakwenzeka ukumfunda - usenokuthi uhlala ehlala eyinyani. Yiza nayo yonke impahla emnyama, ebandakanya i-hoodie.
Izandla vs Arms OTA - Ikhadi loShishino
Ikhadi lomsebenzi weSquid Game kulapho idrama yomthathi-nxaxheba ngamnye womdlalo iqala khona. Fumana amashumi akho kunye nekhadi elinye okanye amabini oshishino ezandleni zakho - baya kukulinda ebholeni.
Umqali wokuSebenza i-OTA - Intliziyo
Ukurhweba ngamalungu ngokungekho mthethweni yinxalenye enkulu yebali. Ngokuhlwanje sifuna ukukubona kwimpahla equka iintliziyo. Cinga ngobume bentliziyo, ushicilelo, iintloko zentliziyo / iipropu okanye nantoni na. Isalathisi sentliziyo kufuneka sicace.
I-Runway yaseYurophu i-OTA - Inkwenkwezi
Ngexesha lomdlalo omnye woluhlu, abathathi-nxaxheba banokukhetha phakathi kweempawu ezahlukeneyo ezingaqondakaliyo. Enye yeesimboli yinkwenkwezi - nguwe lo ngokuhlwanje! Yizise iphefumlelwe yinkwenkwezi. Cinga ngombala, iipateni, ushicilelo okanye imilo yesimboli yenkwenkwezi. <-
Tag Team Sex Siren OTA - Cookies
Umdlalo wecookie sele uyimeme eyaziwayo. Ngokuhlwanje sifuna ukukubona ufumana amashumi akho, ngelixa usitya iqebengwana. Yiza neekuki zakho ozithandayo kwaye wenze shushu.
Tag Team Ubuso OTA VIPs
I-VIPs yombutho we-squid umdlalo we-squid ngabantu abangaqondakaliyo nabacebileyo, abathanda ukubukela ubuhlanya bemidlalo. Baphila ubomi obutofotofo kwaye bazifihla phantsi kweemaski ezintle. Ngokuhlwa nizii-VIP! Yizise ngempahla yodidi kunye nenhle (!!!) kwaye ungalibali ukubonakaliswa kobuso ngexesha lamashumi akho.
Yonke i-Runway yaseMelika i-OTA - i-Umbrella
Olunye uphawu olubalulekileyo lomdlalo wecookie yi-ambulera. Kolu didi sifuna ukukubona ulungiselele imvula. Kwaye ungalibali iambrela yakho enyanzelekileyo.
Eyona Make Up OTA-Ipaseji
Ngaphakathi kwisakhiwo somdlalo weskwidi, kukho ipaseji enkulu enemibala eqaqambileyo enezinyuko ezininzi eziphambeneyo. Yizise iphefumlelwe yiyo kwaye usibonise inkangeleko yokwakheka ekhala i-pastel kunye nejometri. Olu didi lumalunga nobuchule hayi malunga nemihla ngemihla ("entle") yokwenza - cinga ngaphandle kwebhokisi kwaye uphambene nayo.
Ukusebenza kweQela le-OTA (i-3 ppl) ye-150 € - Isikwere, unxantathu, isangqa
Ezi mpawu zintathu zihlala zikhona kulo lonke uchungechunge. Umntu ngamnye kwiqela lakho kufuneka akhuthazwe luphawu olunye. (Ke iqela ngalinye linesikwere esinye, unxantathu omnye kunye nesangqa esinye).
Uya kulwa kuphela neempawu ezifanayo ukuze ukhethe ngobulumko.
Indlela yokubaleka ene-Twist OTA - Jun-ho
UJun-ho lipolisa, eliphanda ngasese kwaye lizama ukufumana malunga nemidlalo ebalulekileyo yesquid. Ukhuthazwe ziimpahla zamapolisa, iiarhente ezifihlakeleyo kunye neentlola.
Fashion Killa OTA - Jackpot
Ophumeleleyo kumdlalo weskwidi uya kuphumelela intywenka yemali. Ngokuhlwanje isinxibo sakho simalunga nemaliyyy! Uphefumlelwe ngeempawu zobutyebi: amakhadi okuthenga ngetyala, imali, iidayimani, igolide, ubucwebe, iimpawu zeedola njl.
FF yokwenyani - Doll
Unodoli odumileyo womdlalo "wokukhanya okubomvu, ukukhanya okuluhlaza" unokubonakala emhle, kodwa uyabulala. Unxibe ilokhwe, enehempe ngaphantsi - yizise njengaye!
Iqela leTag Umzimba-Deok-su
U-Deok-su ngumgulukudu we-archetypal othanda ukuxhaphaza abanye ukuba bazive bephakamileyo. Unoxanduva lwezinye iimeko ezimanyumnyezi zolu chungechunge. Yizise njengaye: ngee tattoos ezininzi! Zinokuba yinyani, inkohliso okanye ungaya kwipeyinti (yomzimba).
Ukusebenza kwibhokisi OTA - tracksuit
Iitracksuits eziluhlaza namhlophe yinto abathathi-nxaxheba abayinxiba kakhulu kulo lonke uthotho. Yizise kwi-tracksuit okanye enye impahla yezemidlalo - kodwa kufuneka ibe luhlaza kunye / okanye ibe mhlophe.
Olu didi lolonwabo ekuqaleni lubizwa ngokuba yi "cunt in a box", kodwa ngokuhlwanje luvuleleke kuzo zonke izitayile zokugqoka. Nantsi indlela osebenza ngayo umdlalo: Kumashumi kunye nawo onke amadabi abathathi-nxaxheba bavunyelwe ukuba bahambe ngaphakathi kwe-lil yabo yesikwere esiya kuzotywa emgangathweni. Ukuba elinye ilungu lomzimba wakho liwela umgca wesikwere - uya kunqunyulwa okanye ufane kuthiwa kuMdlalo weSquid: upheliswe.
Nceda uqaphele: Ukuthatha inxaxheba kwimisitho e-Oyoun okanye undwendwele imiboniso yethu, kufuneka ube nobungqina bokugonywa / ukuchacha. Iimaski ze-FFP2 zinyanzelekile e-Oyoun de kube esinye isaziso. Ulwazi olongezelelweyo malunga nombono wethu wococeko lunokufumaneka Apha.